Sir muhiin ah Baro shumiska naagaha ugu jecelyihiin iyo qeybaha uu kalayahay… | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Sir muhiin ah Baro shumiska naagaha ugu jecelyihiin iyo qeybaha uu kalayahay…
Sir muhiin ah Baro shumiska naagaha ugu jecelyihiin iyo qeybaha uu kalayahay…
Bulsha:- Afka ayaa lagu tilmaamaa qeybta labaad ee raaxada marka laga soo tago xubnaha taranka labada lamaane. Waxaana xusid mudan in dhunkashada ay dhowr nooc kala leedahay oo mid waliba ay wadato heer kul u gaar ah.
-Dhunkashada Dheer (Dhuuqmada) waa mida afka dhan uu ka qeyb galo, bishamaha carabka, ilkaha iyadoo qoor gilin ay ku jirto. Waxa la xaqiijiyay in ragga 70% iyo 60% oo haweenka ah ay jecel yihiin noocaan.
-Dhunkashada Sanka: waxaa jecel 90% haweenka halka 55%, ragguna ay jecel yihiin.
-Dhunkashada carabka: waa midda madax ilaa labada cagood gaarta.
-Dhukanshgada balanta: waa dhunkashada naaska waxaana jecel ragga 75% halka haweenkuna 95% jecel yihiin..
-Dhunakashada kadiska qof oo aan ku ogeyn oo aad dhukansho ku xado ayaa heer kulkeeda waxa uu yahay 10 darajo.